बितेको २४ घण्टामा कहाँ–कहाँ भेटिए कोरोना संक्रमित ? | बितेको २४ घण्टामा कहाँ–कहाँ भेटिए कोरोना संक्रमित ? – हिपमत
बितेको २४ घण्टामा कहाँ–कहाँ भेटिए कोरोना संक्रमित ?
बितेको २४ घण्टामा २ सय २६ जना नयाँ कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कञ्चनपुरमा ११ महिने बालिकासहित २ सय २६ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको हो । योसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या १ हजार ७ सय ९८ पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले बताए ।